ဘန်ဂလို Ooty Kodaikanal ခရီးစဉ် | စာအုပ် + 91-993.702.7574 @ ကိုခေါ်ပါ။
ဘန်ဂလို Ooty Kodaikanal ခရီးစဉ်
အဘယ်သူသည်အချို့သောရက်ပေါင်းချွတ် ယူ. တစ်နေရာငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်ညားထွက်ဦးမှမလိုချင်ပါသလဲ? သင်အမှန်တကယ်လှပဖို့အားလပ်ရက်ယူလိုသူလူများ၏တဦးတည်းဆိုရင် Ootyအဆိုပါဘန်ဂလို Ooty Kodaikanal Tour package ကိုအားလုံးသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒများကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, Kodaikanal နှင့်ဘန်ဂလို, ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာစတင်ရန်သို့မဟုတ်စီစဉ်ဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူး, မရဖဲ့ခြွေ။ တစ်ချိန်ကသင်တစ်ဦးအစပြုပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, တစ်ဦးတာဝန်ရှိနိုင်ပါသည်, ဤကွဲပြားခြားနားသောအရပ်မှခရီးစီစဉ်, လက်ထက်, သင်ခရီးသွားလာ၏ဝမ်းမြောက်တွေ့ကြုံခံစားချင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, အဘယ်သူသည်မဟုတျလော အဆိုပါဘန်ဂလို Ooty Kodaikanal Tour package ကိုသင်ဤခရီးသွားထဲကအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရသေချာပါလိမ့်မယ်။ သင်မြို့တော်ရဲ့သမိုင်းပေါများကြွယ်ဝစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပြီး Ooty နှင့် Kodaikanal ၏သာယာလှပအလှတရားအိပ်မက်ခရီးသွားထက်လျော့နည်းဘာမျှမသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးခရီးစဉ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ တစ်ဦးကဘန်ဂလို Ooty Kodaikanal ခရီးစဉ်သည်သင်၏စံပြခရီးစဉ်အထုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကိုပင်ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ် packages များစေသည်ခရီးသွားအမှုဆောင်အရာရှိများအချိန်မီနှင့်အရည်အသွေးဗဟိုပြုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နေရာထိုင်ခင်းစက်ရုံ, အပန်းဖြေမော်တော်ယာဉ်များနှင့်လမ်းပြပူဇော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများထံမှသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးဖြစ်နိုင်သမျှတိုင်းလမ်းအတွက်စိတ်ကြိုက်အကူအညီများနှင့်အတူ။ သင့်ရဲ့ခရီးသွားစီစဉ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ဘန်ဂလို Ooty Kodaikanal Tour package ကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ဘန်ဂလို (01 ည) - Mysore (01 ည) - Ooty (02 Nights) - Kodaikanal (02 Nights)
06 Nights | tour Code ကို: 036
နေ့ 01: Bangalore
ဘန်ဂလိုလေဆိပ် (ဆိုက်ရောက်အပေါ်တွေ့ကြံနှင့်အကူအညီများ) မှာဆိုက်ရောက်ခြင်းနှင့်ဟိုတယ်မှလွှဲပြောင်း။ နေ့လည်ခင်းဘန်၏ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအဘို့အဆက်လက်ဆောင်ရွက် - Lalbagh ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်, Cubbon ပန်းခြံ, Vidhana Soudha, ဘန်ဂလိုနန်းတော်, Tipu Sultan ရဲ့နွေရာသီနန်းတော်, Bull ဘုရားကျောင်းနှင့် St.Patrick ရဲ့ဘုရားကျောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ဘန်ဂလိုများတွင်ညအိပ်
နေ့ 02: Bangalore - MYSORE (140 ကီလိုမီတာ - 03 နာရီ drive)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Hotel တွင်ထံမှထွက်စစ်ဆေးနှင့်ဟိုတယ်သို့ဆိုက်ရောက်စစ်ဆေးမှုများအပေါ်, Mysore မှမောင်းတယ်။ Mysore ၏ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအဘို့အနေ့လည်ခင်းရရှိသော - Brindavan ဥယျာဉ်, Chamundi တောင်တန်းများ, Mysore ရေကန်, Mysore တိရစ္ဆာန်ရုံ, Mysore အပန်းဖြေခြင်းနှင့် St.Philomena ရဲ့ဘုရားကျောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှု။ နေ့ချင်းညချင်း Mysore နေ။
နေ့ 03: MYSORE - OOTY (180 ကီလိုမီတာ - 04 နာရီ drive)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Hotel တွင်ထံမှထွက်စစ်ဆေးနှင့်ဟိုတယ်သို့ဆိုက်ရောက်စစ်ဆေးမှုများအပေါ်, Ooty မှမောင်းတယ်။ အပန်းဖြေမှာနေ့ဖြစ်၏။ နေ့ချင်းညချင်း Ooty နေ။
နေ့ 04: OOTY
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Ooty ၏ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအဘို့အဆက်လက်ဆောင်ရွက် - ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်, Ooty ရေကန်, Dodabetta Peak, သိုးသငယ်ရဲ့ရော့ခ်နှင့် Kodanadu ရဲ့ကြည့်ရန်ပွိုင့်သွားရောက်ကြည့်ရှု။ နေ့ချင်းညချင်း Ooty နေ။
နေ့ 05: OOTY - KODAIKANAL (260 ကီလိုမီတာ - 06 နာရီ drive)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Hotel တွင်ထံမှထွက်စစ်ဆေးနှင့်ဟိုတယ်သို့ဆိုက်ရောက်စစ်ဆေးမှုများအပေါ်, Kodaikanal မှမောင်းတယ်။ အပန်းဖြေမှာနေ့ဖြစ်၏။ နေ့ချင်းညချင်း Kodaikanal နေ။
နေ့ 06: KODAIKANAL
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Kodaikanal ၏ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအဘို့အဆက်လက်ဆောင်ရွက် - Kodai ရေကန်, Coaker ရဲ့လမ်းလျှောက်, Bryant ပန်းခြံ, အစိမ်းရောင်ချိုင့်ကြည့်ရန်, မဏ္ဏိုင်ကျောက်, Kurinji Andavar ဗိမာနျတျောသို့သွားရောက်။ နေ့ချင်းညချင်း Kodaikanal နေ။
နေ့ 07: KODAIKANAL - Bangalore (450 ကီလိုမီတာ - 08 နာရီ drive) မည်သူမဆို COIMBATORE (265 ကီလိုမီတာ - 05 နာရီ drive)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Hotel တွင်ထံမှထွက်စစ်ဆေးနှင့် မှစ. လမ်းခရီးဘို့ဘန်ဂလို / Coimbatore လေဆိပ်မှမောင်းတယ်။